सपना कहिले पूरा हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? - Nayabulanda.com
सपना कहिले पूरा हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
२ श्रावण २०७५, बुधबार ११:१६ 81 पटक हेरिएको
रोमन आचार्य ।।।
अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोका कारण भक्तपुरमा घरमाथिको ढिस्को खस्दा तीन जनाको मृत्यु भयो । यो असार २८ गतेको घटना हो । अघिल्लो दिनदेखि अविरल परेको पानीका कारण सोही दिन भक्तपुर उपत्यका डुवानमा पर्यो । धेरै मानिसहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पानीजहाज कुदाउने घोको पुरा भयो भन्दै मजाक बनाए । सामाजिक सञ्जालहरुमा ट्रोल भाइरल भयो । धेरै प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको सपनासँग रिसाए पनि ।
काठमाडौं उपत्यका देशको राजधानी हो र पहिलो महानगरपालिका पनि । राजधानी बन्न र महानगरपालिका बन्न धेरै मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्दछ । अरु कुरालाई छोडेर राजधानीको गल्लि र सडकको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाऊँ कतै भेटिदैन र कसैलाई यो राजधानी हो भन्न पनि मन लाग्दैन ।
सडकको उदाहरण हेर्न बौद्ध जोरपार्टी गए हुन्छ । पानी परेको बेलामा यहाँ पनि पानीजहाज कुद्दै छ भनेर जनताले प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अर्थात् यो बाटो पानी परेको बेलामा हिलाम्मे र जलमग्न हुन्छ । खाल्डाखुल्डी धेरै छन् यो बाटोमा । पैदल यात्रा गर्न वर्षातको समयमा गाह्रो हुन्छ । हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे यो बाटोको पहिँचान हो । त्यसकारण काठमाडौंले हिउँदोमा धुलमाण्डु र वर्खामा हिलमाण्डुको उपाधी पाइसकेको छ । जनताले ट्याग भिराइसकेका छन् । केही समय अघि साहित्यकारहरुले सडकमै हिले साहित्य समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावताका भाषणमा काठमाडौंमा चुनाव सकिने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक बस चलाउने सपना जनतासामु बाडेका थिए । चुनावताका उनले भाषणमा मेट्रो बस चलाउने भनि गरेको प्रतिवद्धताको भिडियो हामीसँग सुरक्षित छ । तर जनताले इलेक्ट्रोक बसको होइन पुराना गाडिमा समेत बसेर यात्रा गर्न पाएका छैनन् । जनता सानो माइक्रोमा असिन पसिन हुँदै कोचीएर यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।
सरकारले गर्न नखोजेको पनि हैन । सिण्डिकेट हटाएकै हो । व्यवसायीहरुसँग जुधेर यात्रुहरुलाई सहजता ल्याउन खोजिएको पक्कै हो । तर सिण्डिकेट हटाइयो नयाँ यातायातका साधन व्यवस्था गर्न सकिएन । अनि फेरी दुःख पाउनेमा जनता परे । अनि प्रम ओलीको काठमाडौंमा इलेक्ट्रोनिक बस चलाउने सपना पनि भाषणमा मिठ्ठो सुनियो , व्यवहारमा हात लाग्यो शून्य ।
नेकपाको चुनावताका घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने वाइफाइ फ्रि , प्रविधि मैत्री जमानामा इन्टरनेट फ्रि लगायतका कुराहरु भेटिन्छ । देशभर वाइफाइ तथा इन्टरनेट फ्रि गर्ने कुराले युवा तथा प्रयोगकर्ताहरु आकर्षित भएका थिए । तर साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट शुल्क पनि बढेको छ । यो पनि जनता झुक्याउने फण्डा भएको छ ।
प्रस्तुत उदाहरणहरु उपत्यका भित्रका मात्र हुन् । समस्याहरु देशभर छन् । यसलाई प्रतिनिधी घटना बनाइएको हो ।
यतिवेला सरकारको वागडोर दुई तिहाई मत रहेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ । सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम पनि साझेदारको रुपमा रहेको छ । भनौं सरकार पाँच वर्ष फेरवदलको खेलमा छैन ।
यो समय मध्य वर्षाको समय हो । बाढीपहिरोले दुरदराज, राजमार्ग, टोलटोलमा समस्या निम्त्याइरहेको छ । देशको राजधानी नै जलमग्न भयो, घर भत्किए, सडक भत्कियो, पुल भत्कियो । कतिपय मानिसको ज्यान गयो, कतिपय घाइते भए, कति विस्थापित भए । जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । पानी जहाजदेखि रेलसम्मको सपना बाँड्ने सरकारले राजधानीमै ढल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अत्यासलाग्दो परिस्थितिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
यतिवेला जनता ढुक्क र चिन्तित दुवै छन् । ढुक्क यस अर्थमा छन् कि जनमत प्राप्त सरकार छ । विश्वको शक्तिशालि राष्ट्र चीनमा जस्तै कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । गरिव निमुखा र श्रमजीवि मजदुरहरुको नेतृत्व गर्ने सरकार छ । भारतसँग नाकाबन्दी ताका नझुकेर आफ्नो छवी बनाएका ओली नेतृत्वको सरकार छ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर विकासको संभाव्यता फराकिलो पारेको सरकार छ ।
जनता यस अर्थमा चिन्तित छन् कि चुनावताका आजको भोली परिवर्तन हुन्छ भनेर भोट मागेका प्र.म ओली नेतृत्वको सरकार खरायोको गतिमा हैन कछुवाको गतिमा हिडिरहेको छ । त्यी चुनावमा बाडिएका आवश्वासन पुरा नहुँदा जनता चिन्तीत छन् । समृद्धिको सपना पानी जहाज र रेलमार्ग भनिरहँदा बाढीका वर्षेनी झापा , मोरङ्ग , सप्तरी , सिरहा लगायतका जिल्लाहरुमा मानिसहरु डुवानमा पर्दा समेत प्रकोप व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी गरेको नदेख्दा मानिसहरु चिन्तीत छन् । सिमा मिचिरहेको विषयमा सरकारको मौनतामा जनतामा चिन्ता बढेको छ । शिक्षा, न्यायलय , अख्तियार अनि सुनकाण्ड लगायतका क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टचारका कारण जनता चिन्तित छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पर्यटकीय क्षेत्र चन्द्रागिरी पुगेर कविता लेखेका छन् । मरेपछि पनि सपना देख्न पाइयोस् भनेर । यो कविता जस्तै ओलीले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गएर गरेका प्रतिवद्धताहरु सपना त हैन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाऊँ प्रशस्त छ । परिवर्तन र विकास आजको भोली हुने विषय हैन भन्ने भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सपना बाडेका हुन् । सपना पनि कति तत्काल पुरा गर्नु पर्ने विषयमा छन् भने कति महत्वकाक्षी पनि छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बाडेका केही सपनाहरु
घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्‍र्याउँछु
‘‘यो जमाना ग्यासका सिलिण्डर काधमा बोकेर , मोटरसाइकलमा बोकेर हिड्ने समय होइन । सिलिण्डरको फेज समाप्त गर्दिन्छु । घर घरमा ग्यासको पाइप व्यवस्था हुन्छ । मिटर भित्तामा टास्ने, प्याट पार्दा चुलो बल्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले गरेको अद्योषित नाकाबन्दीको बेलामा भाषणमा यसो भन्दै हिड्थे । कुन कुन खनिज पदार्थको खानी छ भनेर पहिँचान हुन नसकेको यो देशमा यो समय आउन कति वर्ष अझै कुर्नु पर्ने साथदै स्वयम् प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । उनले नाकाबन्दी ताका आफ्नै देशमा प्रेट्रोल उत्पादन हुने कुरा गरेका थिए । आजका दिनसम्म त्यसको छनक जनताले पाएका छैनन् ।
दुई वर्षभित्र तुइने हटाउँछु
पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी समहाल्दा ओलीले दुई वर्ष भित्र देशभर भएका तुइन हटाउछु भनेका थिए । तर हालसम्म उनको त्यो प्रतिवद्धता पूरा भएको छैन । ओली फेरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न आएका छन् उनले फेरी पनि देशभर रहेका तुइन हटाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । पहिलो पटक सरकारमै रहँदा उनले तुइन हटाउन दुई वर्ष नलाग्ने र दुई वर्ष भित्र तुइन नहटे फोटो खिचेर लिएर आउनु भनेका थिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका अनुसार देशभर करिव ९० ओटाको हाराहारीमा मात्र तुइन विस्थापीत भएको छ ।
पूर्व पश्चिम रेल कुद्छ
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व पश्चिम रेल , काठमाडौंमा मेट्रो रेल , भारतसँग रेलवे लाइन , चीनसँग रेलवे लाइन लगायतका विषयमा धेरै भाषण गरे । उनले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा समेत यो विषय प्राथामिकतामा राखे । समृद्धिको सपना नै रेल र पानीजहाज भनेर बाडिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो रातारात रेल आउने संभावना नेपालमा छैन । यसको अध्ययन र लगानीको विषय महत्वपूर्ण हो । रेल कुद्न समस्या हैन रेल वेका लागि के कति लगानी चाहिन्छ, त्यो लगानी कहाँबाट आउँछ ? यो विषय चाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
हुन त नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो घनी देश हो । विज्ञहरु भने नेपालमा पानीजहाजको संभावना असम्भव ठान्दछन्। पानीजहाज संभव भयो भने पनि यो एक दुई वर्षे योजनाले हुने विषय हुँदै होइन । नेपालको नदिनालाको भौगोलिक अवस्था , प्राविधिक पक्ष , लगानीको पक्ष यि सवै विषयमा वृहत अध्ययन नगरिकन पानीजहाजको सपना बुन्नु उपयुक्त हुँदैन । पानीजहाजको लागि पानी प्राथामिक विषय भए पनि पानी मात्र सम्पूर्ण कुरा होइन ।
ओलीले संसदमा भाषण गर्दै मंगोलिया देशको उदाहरण दिएका थिए । भुपरिवेष्ठित राष्ट्र मंगोलियामा २६५ वटा जहाज भएको भन्दै नेपाल पनि हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डा भएका पानी जहाज कुदाउन सक्ने बताएका थिए । जसरी एक दुई वर्षमै पानीजहाज कुद्छ भन्ने सपना बाडिएको छ , सरकारको यो गतिले सहज छैन । यसैको परिणामस्वरुप ओलीलाई व्यंग गर्दै बाल्टिनमा कागजका डुंगा बनाइएर सामाजिक सञ्जालहरुमा ट्रोल बनाइएको हो ।
काठमाडौंमा इलेक्ट्रीक बस
अब धुवा उडाउने बस होइन, इलेक्ट्रीक बस सञ्चालनमा आउछ भनेर काठमाडौंमा भाषणले केही वर्ष अगाडि खुव चर्चा कमाएको थियो । सरकारले यातायत क्षेत्रमा भएका सिण्डिकेट पनि हटाउन खारेज गर्यो । त्यसको परिणामस्वरुप जनता अझै पनि गाडिका सहचालकसँग झगडा गर्दै खादिएर बस, टेम्पो , माइक्रो लगायतका सवारी साधनमा यात्रा गर्नु परेको छ । यो अवस्थामा मेट्रो रेल र इलेक्ट्रीक बस कहिले आउछ । जनता निराश हुँदै पर्खिरहेका छन् ।
गरिव, दलित र लोपोन्मुख समुदायका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने ओलीको प्रतिवद्धता स्वागतयोग्य छ । शिक्षा संविधानतः मौलिक हक पनि हो । तर, उच्च शिक्षासम्म सरकारले नै निशुल्क शिक्षा दिने ओली प्रतिवद्धता विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य व्यक्तिबाट सहयोग खोजेपछि खण्डित भएको छ ।
उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने भर्ना अभियानका क्रममा शिक्षा मन्त्री , पर्यटन मन्त्री लगायत स्वयम् प्रधानमन्त्रीले जो जो बालबालीकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे , मन्त्री र विद्यार्थीबीच सम्पर्क समेत छैन । यस्तै चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको सुनुवाई नगर्ने, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा लिने, अस्पतालबाट चिकित्सकलाई अपहरण शैलीमा बिना कारण गृह मन्त्रालयमा ल्याएर घण्टौ यातना दिने सरकारबाट शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने माध्यामहरु धेरै छन् ।
वृद्धभक्ता र रोजगारी
प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावताका एउटा भनाई धेरै चर्चामा थियो । बृद्धबृद्धालाई हेर्ने सरकार बन्दैछ । अर्थात् बृद्ध भक्ता दुई हजारबाट बडाएर पाँच हजार पुर्याउने उनले भाषण गर्दै मत मागेका थिए । उनले भनेका थिए घर घरमा गएर हात हातमा पाँच हजार राखेर नमस्कार गरेर फर्किने छौं । तर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटमा पाँच हजार कहीँ कतै उल्लेख छैन । यो केबल वृद्धवृद्धाको मन जितेर भोट संकलन गर्ने फण्डा भएको छ ।
यस्तै अहिलेसम्मको सरकारी गति हेर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई विदेशी श्रम बजारमा नपठाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने देखिदैन । लगानी र ठूलाठूला उद्योग स्थापनाले मात्र यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन सक्छ ।